आज हामी एउटा प्रश्न तपाईंलाई बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्: "मेगा ब्राउज: ब्राउजर र कम्प्युटर कसरी विज्ञापन हटाउन"। साथै, का कसरी यो संक्रमण सञ्चालन प्रणाली भित्र, यो नै कसरी प्रकट गर्न सक्छन् साथै लग छ सोच्न प्रयास गरौं। हामीलाई सकेसम्म सुरु गरौँ।
पहिलो, गरेको मेगा सामान्य ब्राउज के हो बुझ्न प्रयास गरौं। किनभने राम्ररी भाइरस को सफाई पूरा गर्न, यो हामी सामना गर्न के थाहा आवश्यक छ।
मेगा ब्राउज - विशेष ब्राउजर विस्तार भन्दा बढी केही हो। यसलाई "सुस्त" गर्न कम्प्युटर (साथै Trojans को एक किसिम) मात्र होइन गराउँछ, तर पनि विज्ञापन र ब्यानरहरू एक नयाँ पृष्ठ खोल्न।
स्वयं मेगा ब्राउज हटाउन एकदम गाह्रो हुनेछ। विशेष गरी तपाईंलाई थाहा छैन यो भाइरस नै कसरी प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ भने। त्यसैले के के बाहिर आंकडा प्रयास गरौं। तर पहिलो, गरेको हेर्न यो आक्रमण कहाँ गरौं।
संक्रमण पहिलो स्रोत - शंकास्पद वा विज्ञापन साइटहरु छ। तपाईं विज्ञापन ब्यानरहरू वा पप-अप विज्ञापन मा क्लिक गर्नुभयो भने, त्यसपछि तपाईं छक्क हुँदैन।
यसबाहेक, मेगा ब्राउज विभिन्न पटाखे डाउनलोड वा डाउनलोडरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मा चुक्छौं। यो सामग्री फाइल भाइरस को "बाढी" पछि छ। "मेगा ब्राउज: कसरी एक पटक र सबै को लागि हटाउन?" त्यसैले हामी प्रश्न विचार गर्नुपर्छ। तर पहिलो, का भाइरस कसरी व्यवहार बुझ्न प्रयास गरौं।
प्रणाली को प्रकटीकरण
प्रत्येक भाइरस तरिका कम्प्युटरमा एक पटक नै प्रकट। तपाईं मेगा विज्ञापन ब्राउज हटाउन त अघि, गरेको हामी यो ट्रोजन सामना भनेर पक्का गर्न सक्नुहुन्छ कसरी हेर्न दिनुहोस्।
संक्रमण पहिलो साइन - एक तपाईंको सञ्चालन प्रणालीको लागि "ब्रेक" छ। यो व्यवहार साधारण कुनै पनि भाइरस हिट जो कम्प्युटर, को लागि विशेषता छ। तपाईं एक दीर्घ सञ्चालन नोटिस त यो विचार लायक छ।
दोस्रो परिदृश्य - तपाईं स्थापना गर्नुभएको तपाईँको कम्प्युटरमा नयाँ सामग्रीको उद्भव छ। त्यसैले, तपाईं अतिरिक्त कार्यक्रम धेरै आफूलाई पाउन भने, यो आवश्यक सोच्न, आफ्नो sistemnik भाइरस त्यहाँ प्राप्त भएन विशेष, मेगा ब्राउज छ। कसरी एक पटक र सबै को लागि आफ्नो सिस्टम देखि यसलाई हटाउन? कुनै पनि योग्य प्रयोगकर्ता ह्यान्डल गर्न सक्छन्, मुख्य कुरा हो - सही निदान गर्न।
अर्को साइन - निरन्तर माथि popping र पप-अप विज्ञापन ब्यानरहरू को पाठ्यक्रम छ। तिनीहरूलाई कसरी धेरै आवरण - तिनीहरू अझै पनि फेरि फेरि खुला हुनेछ। र पनि मा टास्क प्रबन्धक नयाँ कार्य, प्रोसेसर मा एकदम भारी लोड देखाउनेछ। अब विषय सामना गरौं: "? मेगा ब्राउज - तपाईंको कम्प्युटरबाट हटाउन कसरी"।
त्यसैले, कसरी कुनै पनि भाइरस विरुद्ध लडाई सुरु गर्न? निस्सन्देह, एक साथ आफ्नो कम्प्युटर को स्क्यान आफ्नो एन्टिभाइरस सफ्टवेयर प्रयोग गरेर। पूर्ण र तीव्र निको सिस्टम को एक ग्यारेन्टी, तर लग्नु गर्नुपर्छ भन्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कदम को केवल एक - यो छ कि उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
अर्डर राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न, यो एक राम्रो एन्टिभाइरस प्रोग्राम किन्न आवश्यक छ। यो उद्देश्य पूर्ण Dr.Web लागि। यो विज्ञापन र स्पाम सामना यसको सफलता को लागि प्रसिद्ध छ। तर, केही Nod32 प्रयोग गर्न रुचाउँछु। पनि एक राम्रो विचार।
अब, अन्तमा मुद्दा बन्द गर्न: - तपाईं गहिरो स्क्यान गर्न आवश्यक हुनेछ "? मेगा ब्राउज कसरी आफ्नो कम्प्युटरबाट एक पटक र सबै को लागि हटाउन"। यो तपाईं धेरै घण्टा 15 मिनेट लाग्न सक्छ। त्यसैले कृपया धैर्य गर्नुहोस्।
पूरा स्क्यान? त्यसपछि परिणाम हेर्न। तपाईंले सबै संक्रमित फाइलहरू निको पार्न छ। जाने छैन? त्यसपछि तिनीहरूलाई मेटाउन। अब तपाईं अर्को चरणमा अगाडि बढ्न सक्छ। यो पनि एक साईट प्रयोगकर्ता सम्हाल्न सक्नुहुन्छ देखि।
दोस्रो चरण। तपाईं के गर्न भनेर - तपाईं सामग्री धेरै कार्यक्रम तपाईंको कम्प्युटर को सफाई र अपरिचित छ। यो गर्न, "कन्ट्रोल प्यानल" मा जानुहोस्। यसलाई मा, फेला "थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् कार्यक्रममा।" यो लाइन मा क्लिक गर्नुहोस् र प्रतीक्षा गर्नुहोस्। तपाईं सबै स्थापित सामग्रीको सूची पाउनुहुन्छ।
अब तपाईंले स्थापित छैन केहि हटाउन। यो तपाईं अब प्रयोग पनि ती कार्यक्रम हटाउन सबै भन्दा राम्रो छ। यो अपरेटिङ सिस्टम सफा गर्न मद्दत गर्नेछ। साथै, सबै हटाउन कार्यक्रम मेगा ब्राउज सुरु। यसमा त इच्छित कार्य प्रेस, दायाँ माउस बटन क्लिक गर्नुहोस्। तयार हुनुहुन्छ? त्यसपछि त्यहाँ सरल कदम को एक जोडी के छ - र तपाईंले कम्प्युटर फेरि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई के आवश्यक छ हेरौं।
तपाईं प्रश्न बारे सोच छ भने: "? मेगा ब्राउज - कसरी मुक्त हटाउन", यो आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम को फाइल मा एक सानो आरोहण लायक छ। यो कम्प्युटरको रजिस्ट्री मा हेर्न आवश्यक हुनेछ।
प्रमुख संयोजन विन + R प्रेस, त्यसपछि आदेश "regedit" चयन गर्नुहोस्। यसलाई "हुनेछ" तपाईं सेवा आवश्यक छ। कि पछि तपाईं विभिन्न फोल्डरहरूमा बाँया प्यानल देख्ने। आफ्नो उद्घाटन आवश्यक छैन। बस गर्न "सम्पादन गर्नुहोस्" (यो उपकरण पट्टी को शीर्ष मा स्थित छ), र त्यसपछि जानुहोस् - "खोज" मा। साना विन्डो सूची मेगा ब्राउज मा। स्क्यान सुरु गर्नुहोस्।
अब तपाईं पायो के हेर्न। केही फाइलहरू पत्ता गरिएको छ? यदि हो, त्यसपछि मात्र मेटाउन। यो बिना तपाईं वर्णन भाइरस को सुरक्षित निपटान छोड्न छैन। त्यसैले, यो चरण छोडेर गरिनेछ, यो सम्भव हाम्रो लडाई अर्को सानो परीक्षण समाप्त गर्न छ। अब हामी यो के हो हेर्नुहोस्।
खैर, अब हामी हाम्रो व्यापार को अन्त गर्न आउँछन्। अब हामी डाउनलोड र आफैलाई लगभग कुनै पनि भाइरस नष्ट गर्न मद्दत गर्नेछ दुई धेरै उपयोगी कार्यक्रम स्थापना हुनेछ। गरेको यो के हो हेरौं।
पहिलो कार्यक्रम - SpyHunter छ। यो उपयोगिता प्रणाली प्रयोगकर्ता स्क्यान र खोजी गर्न मद्दत गर्छ मद्दत गर्छ लुकेका फाइलहरू र फोल्डरहरू। साथै, त्यो स्पाम र भाइरस विज्ञापन copes। यो स्थापना र स्क्यान बटन मा क्लिक गर्न पर्याप्त छ। त्यसपछि सबै पत्ता मालवेयर फाइलहरू हटाउनुहोस्। अब हामी अर्को अनुप्रयोग प्रयोग गर्न छ।
प्रश्न तपाईंलाई हैरान छन् भने: "? मेगा ब्राउज - छिटो र निःशुल्क हटाउन कसरी," यो तपाईं Ccleaner गर्न उपयोगी छ। यो कार्यक्रम हटाउँदछ अस्थायी फाइलहरू, सेटिङहरू र ब्राउजर एडअनहरू। धेरै उपयोगी, विशेष गरी जब सबै अघिल्लो कदम संग संयुक्त। यसलाई स्थापना गर्नुहोस्। विन्डो बायाँ भाग मा टिप्पणी सुरु गरे पछि - यो सेटअप कार्यक्रम समावेश छन्। तपाईंको ब्राउजरमा भन्छिन् कि सबै, साथै हार्ड डिस्क सबै खण्डहरू बन्द टिकटिक। अब तपाईंको अपरेटिङ सिस्टम स्क्यान गर्नुहोस्। को स्क्यान पूरा गर्दा, "सफा" मा क्लिक गर्नुहोस्।
सबै कार्यक्रम बन्द, र "टास्क प्रबन्धक" पछ्याउने। यो गर्न, प्रेस Ctrl + Alt + Del र त्यसपछि चाहेको वस्तु चयन गर्नुहोस्। अब "प्रक्रियाहरू" गर्न उत्प्रेरित। त्यहाँ पूरा मेगा ब्राउज र सबै nasozdavali भाइरस छ। सामान्यतया, यी "साना कुराहरू" अस्पष्टता हस्ताक्षर गरे। तपाईं आफ्नो कम्प्युटर पुन: सुरु गर्न पठाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईं कसरी भाइरस सामना गर्न थाहा छ।
भाइरस Gvapp.ru: हटाउन कसरी?
स्काइप: kernell32.dll त्रुटि। कसरी मिलाउने?
"साना राजकुमार": एउटा विश्लेषण। "साना राजकुमार": सेन्ट-Exupéry को काम
एक व्यक्ति रूपमा मानिसको विकास मा मुख्य चरण, वा किशोरावस्था के हो
Booties कसरी सी गर्न। ढाँचा bootees
आत्म-विकास लागि अनन्त अवसर रूपमा निद्रामा को व्यवस्थापन र जीवन लक्ष्य हासिल